ဝါယာကြိုးများနှင့်ကေဘယ်လ်များနှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံအသိပညာ - Huatai
ဝါယာကြိုးများနှင့်ကေဘယ်များကိုအဓိကအားဖြင့်အပိုင်း ၅ ပိုင်းခွဲခြားထားသည် - ရှင်းလင်းသောဝါယာကြိုးများ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝါယာကြိုးများ၊ ပါဝါကေဘယ်လ်များ၊ မတူညီသောဝါယာကြိုးများနှင့်ကေဘယ်ကြိုးများသည်မတူညီသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ ထို့နောက်ဝါယာကြိုးနှင့်ကေဘယ်ကြိုးအမျိုးအစားများကိုကြည့်ကြပါစို့။
Bare wire သည်အဓိကအားဖြင့်အပြင်ပိုင်း overhead အတွက်အသုံးပြုသော insulation wrap မပါသော wire တစ်ခုဖြစ်သည်။
Electromagnetic wire ဆိုသည်မှာ electromagnetic coil တွင်အသုံးပြုသော wire ကိုရည်ညွှန်းသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝါယာကြိုးသည်ဝါယာကြိုးနည်းပညာအတွက်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များရှိပြီးပြင်းထန်သောတုန်ခါမှု၊
ပါဝါကေဘယ်လ်များသည်အဓိကအားဖြင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှင့်ရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုနံရံပေါ်ရှိစက္ကူ၊ ရာဘာသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်များဖြင့်ထုပ်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ cable သည်ချေးသည့်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး insulation ခိုင်ခံ့ခြင်း၊ voltage မြင့်မားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်လိုအပ်ချက်နိမ့်ခြင်းများရှိသည်။
ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်များသည်အဓိကအားဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြား၊ တယ်လီဖုန်း၊ ကွန်ယက်၊ ထုတ်လွှင့်သည့်အချက်ပြစသည်တို့ကိုထုတ်လွှင့်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ကြီးမားသောအချက်ပြစွမ်းရည်နှင့်ခိုင်မာသောကာကွယ်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။
cable trays အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်။ step-through trays များ၊ များသောအားဖြင့် power cable ကဲ့သို့သောကြီးမားသောအချင်းကြိုးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ Slot-type straight-through တံတားသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကွန်ယက်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေးစသည်တို့တွင်ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်ကြိုးများတွင်အသုံးပြုသည်။ Tray-type through-bridge သည်ပါဝါကေဘယ်များနှင့်အချက်ပြမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။
ကေဘယ်ကြိုးများတပ်ရန်လိုအပ်သောလျှပ်စစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် cable terminal junction box များ၊ cable အလယ်အလတ်ချိတ်ဆက်ထားသော box များ၊ ဆက်သွယ်ထားသောပိုက်များနှင့် terminal များ၊ သံမဏိပြားချိတ်ဆက်မှု slot များ၊ cable trays စသည်တို့ပါဝင်သည်။
1. ဝါယာကြိုး၏ rated voltage သည်အမှန်တကယ် voltage ထက် ၁.၅ ဆပိုမိုမြင့်မားသည်။
2. ဝါယာကြိုး၏လက်ရှိသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းယေဘုယျအားဖြင့် 1.5 ဆထက်အမှန်တကယ်လက်ရှိထက်ပိုသည်။
၃။ ရှည်လျားသောကြိုးများကိုချထားပါက voltage drop အားတွက်ချက်တွက်ပါ။
၄။ wire သည် protection device အလုပ်လုပ်သောအခါ voltage နှင့် current ကိုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုသည်။